विश्वका धनी अमेजनका सिइओको यस्तो सेक्स टेप : यही कारण श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद ! « The News Nepal
विश्वका धनी अमेजनका सिइओको यस्तो सेक्स टेप : यही कारण श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद !
काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्तिको रुपमा रहेका अमेजनका सीईओ जेफ बेजोसमाथि ठुलो आपत्त आइलागेको छ । अमेरिकाको नेशनल एनक्वाइरर टैबलाइडले उनलाई फसाउँन खोजेको उनले आरोप लगाएका छन । बेजोसका अनुसार, “नेशनल एनक्वाइररका वकीलले मेरो र पूर्व टीवी एङ्कर लरेन सान्चेजको अश्लील तस्वीर सार्वजनिक गर्ने धम्की दिइरहेको बताएका छन् । पत्रिकाका वकीलले मेरा वकीललाई ईमेल गरेर धम्की दिएका छन ।” बेजोसलाई थाहाँ छैन उनको नीजि तस्वीर कसरी उक्त पत्रिकाको हातमा पर्यो । उनलाई यस घटनामा चुप बस्नको लागि उक्त पत्रिकाले दबाब दिइरहेको छ । बेजोसले बिहिबार एक ब्लग लेखेर यस्तो खुलासा गरेका हुन् ।
नेशनल एनक्वाइररका प्रकाशक एएमआईले बेजोसले हालैं गरेको सम्बन्ध विच्छेद यही सम्बन्धका कारणले गर्दा भएको स्वीकार गर्नको लागि दबाब दिएको उनको आरोप छ । पत्रिकाले सस्तो लोकप्रियताको लागि आफुलाई बद्नाम गर्न खोजेको भन्दैं यसका विरुद्ध आफु लड्ने उनले जानकारी दिए । नेशनल एनक्वाइरर टैबलाइड गएको महिना बेजोस के पूर्व टीवी एङकर लरेन सान्चेजसँग सम्बन्धमा रहेको खुलाएको थियो । यसकारणले गर्दा उनले पुर्व पत्नी मैकेन्जीसँग पारपाचुकेको घोषणा गरेका दाबी छ । द एनक्वाइररले भनेको छ उसले चार महिनादेखी यस घटनाको बारेमा गहिरो अध्यन गरिरहेको थियो ।
पत्रिकाले आफुसँग बेजोस र लरेनसँगको अश्लील तस्वीर पनि भएको दावी गरेको छ । पत्रिकाले उनीहरुले ७२७ करोड मुल्य बराबरको जेटमा अमेरिकी शहरहरुमा घुमेको दाबी गरेको छ । पत्रिकाले गएको केही महिनाभित्रमा बेजोसले सान्चेजलाई आफ्ना आपत्तिजनक तस्वीर म्यासेज पनि गरेका छन भनेको छ । उसले यि सबैं तस्वीरको साथमा ११ पेज लामो कथा बनाउँन लागेको बताएको छ । बेजोसले एएमआईमाथि पत्रकारिताको विशेषाधिकार दुरुपयोग गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
बेजोस भन्छन् “मेरा नीजि तस्वीरहरु पत्रिकामा पकाशित नगरियोस् ।”तर, एएमआईले गरेको बल्याकमेल, राजनीतिक पक्षपात, र भ्रष्टाचारमा उनी शहभागि हुन चाहाँदैनन् । बेजोसका अनुसार उनी यस घटनामा तबसम्म लड्नेछन जबसम्म उनलाई न्याय मिल्दैन । दैनिक भास्करबाट